အပြစ်ပြောလာတဲ့ ပရိတ်သတ် တစ်ဦးကို ရိုင်းပြစွာ ပြန်လည်ပြောဆိုနေတဲ့ မိုးမိုးရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်… – Cele Oscar
ပရိတ်သတ် ကြီးရေ… အနုပညာ လောကမှာ တေးသီချင်း များစွာကို သီဆို ထားတဲ့ အဆိုတော် မိုးမိုးဟာ ဆိုရင် အခု လက်ရှိမှာ မော်ဒယ် မြတ်ပီတိမိုး ဆိုတဲ့အမျိုးသမီး နဲ့ လက်ထပ်ထားပြီး ကလေးနှစ်ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင် ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်..။မိုးမိုးဟာ စစ်ကောင်စီ က ကျင်းပ ပြုလုပ်တဲ့ သင်္ကြန်ပွဲတော်မှာ ယုန်လေး တို့နဲ့ အတူ တက်ရောက် ခဲ့တာပါနော်။ ဒါ့အပြင် လတ်တလော အွန်လိုင်းပေါ် မှာလည်း ကိုဗစ်ကာလ သင်္ကြန်တွင်းမှာ Live လွှင့်နေရင်း ပရိသတ်တွေကို မချေမငံ ပြန်ပြော နေတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လည်း အတော်ကို ပြန့်နှံ့ နေတာပါနော်။
ကိုရီးယားတွင် နေထိုင်တဲ့ ဆရာမ ချမ်းမြမြသော် ကလည်း ” အဆိုတော် မိုးမိုး ဆိုတဲ့ ဝက်ကလည်း ကိုက်လိုက်တာ တငမ်းငမ်း နဲ့ မြင်လို့တောင် မကောင်းဘူး။ သူတို့ ပြောလို့သာ ပြော ရတာ အဆိုတော်လို့ ။ အနူတောထဲ လူချော လုပ်တဲ့ အဆင့် လောက်နဲ့ သီချင်းလေး တစ်ပုဒ် နှစ်ပုဒ် ကောက်ဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် အဆိုတော် အနုပညာသည် လုပ်နေတဲ့ ဟာတွေ။ အသံက လမ်းထဲက ပဲပြုတ်သည် မထားထက် ပြဲသေးတယ်။
အဆင့်မှီ အတန်းမှီ နဲ့ ဆိုနိုင်တဲ့ နိုင်ငံကျော် ဆိုရင် live ထဲကနေ ထွက်လာပြီး အုပ်စုလိုက် ကိုက်မလား မသိဘူး။ ဝေါ့ကဲ မပြော မိအောင် အခုတလော ကြိုးစား လစ်လျူရှုနေတာကို ပြောမိ ပြန်ပါပြီ…. ” ဆိုပြီး ပြည်သူ့ ချဉ်ဖတ် မိုးမိုး ရဲ့ ပုံစံကို ထင်သာအောင် ပြောပြလိုက် ပြန်ပါပြီနော်။ ပရိတ်သတ်ကို မချေမငံ ပြန်လည်ပြောဆို လိုက်တဲ့ မိုးမိုးတို့ ဇနီးမောင်နှံ ရဲ့ ဗီဒီယိုကို အခုလိုပဲ တစ်ဆင့်ပြန်လည် ကူးယူတင်ဆက် ပေးလိုက်ပါတယ်နော်..။ဖတ်ရှု ပေးတဲ့ ပရိတ်သတ် ကြီးကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…။
ပရိတျသတျ ကွီးရေ… အနုပညာ လောကမှာ တေးသီခငျြး မြားစှာကို သီဆို ထားတဲ့ အဆိုတျော မိုးမိုးဟာ ဆိုရငျ အခု လကျရှိမှာ မျောဒယျ မွတျပီတိမိုး ဆိုတဲ့အမြိုးသမီး နဲ့ လကျထပျထားပွီး ကလေးနှဈယောကျကို ပိုငျဆိုငျ ထားတာပဲဖွဈပါတယျနျော..။မိုးမိုးဟာ စဈကောငျစီ က ကငျြးပ ပွုလုပျတဲ့ သင်ျကွနျပှဲတျောမှာ ယုနျလေး တို့နဲ့ အတူ တကျရောကျ ခဲ့တာပါနျော။ ဒါ့အပွငျ လတျတလော အှနျလိုငျးပျေါ မှာလညျး ကိုဗဈကာလ သင်ျကွနျတှငျးမှာ Live လှငျ့နရေငျး ပရိသတျတှကေို မခမြေငံ ပွနျပွော နတေဲ့ ဗီဒီယိုဖိုငျလညျး အတျောကို ပွနျ့နှံ့ နတောပါနျော။
ကိုရီးယားတှငျ နထေိုငျတဲ့ ဆရာမ ခမျြးမွမွသျော ကလညျး ” အဆိုတျော မိုးမိုး ဆိုတဲ့ ဝကျကလညျး ကိုကျလိုကျတာ တငမျးငမျး နဲ့ မွငျလို့တောငျ မကောငျးဘူး။ သူတို့ ပွောလို့သာ ပွော ရတာ အဆိုတျောလို့ ။ အနူတောထဲ လူခြော လုပျတဲ့ အဆငျ့ လောကျနဲ့ သီခငျြးလေး တဈပုဒျ နှဈပုဒျ ကောကျဆိုပွီး ကိုယျ့ကိုကိုယျ အဆိုတျော အနုပညာသညျ လုပျနတေဲ့ ဟာတှေ။ အသံက လမျးထဲက ပဲပွုတျသညျ မထားထကျ ပွဲသေးတယျ။
အဆငျ့မှီ အတနျးမှီ နဲ့ ဆိုနိုငျတဲ့ နိုငျငံကြျော ဆိုရငျ live ထဲကနေ ထှကျလာပွီး အုပျစုလိုကျ ကိုကျမလား မသိဘူး။ ဝေါ့ကဲ မပွော မိအောငျ အခုတလော ကွိုးစား လဈလြူရှုနတောကို ပွောမိ ပွနျပါပွီ…. ” ဆိုပွီး ပွညျသူ့ ခဉျြဖတျ မိုးမိုး ရဲ့ ပုံစံကို ထငျသာအောငျ ပွောပွလိုကျ ပွနျပါပွီနျော။ ပရိတျသတျကို မခမြေငံ ပွနျလညျပွောဆို လိုကျတဲ့ မိုးမိုးတို့ ဇနီးမောငျနှံ ရဲ့ ဗီဒီယိုကို အခုလိုပဲ တဈဆငျ့ပွနျလညျ ကူးယူတငျဆကျ ပေးလိုကျပါတယျနျော..။ဖတျရှု ပေးတဲ့ ပရိတျသတျ ကွီးကို အထူးပဲ ကြေးဇူးတငျပါတယျ…။